လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေးကဏ္ဍက အထောက်အကူ ယူလျက်ရှိ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ တာဝန်ရှိသူများသည် ယနေ့နံနက် ၈နာရီတွင် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ ကျင်းပ သော မြို့မိမြို့ဖများ၏ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပညာရည်ချွန် ရွှေတံဆိပ်ဆု ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲသို့ တက်ရောက် အားပေးသည်။
မောင်တောမြို့နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်နှင့် စစ်တွေမြို့များရှိ ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ကြည့်ရှုအားပေး
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာချမ်းသာနှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယနေ့နံနက်ပိုင်း တွင် တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် မောင်တောမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများ အား မောင်တောမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးကုသပေးနေမှု များကို ကြည့်ရှု့အားပေးသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် သတင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်သည် ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများ၊ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ပြည်ပသတင်းဌာနများနှင့် ပြည်တွင်း သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များမှ အယ်ဒီတာနှင့် သတင်းထောက်များအား ယနေ့ ညနေ(၄)နာရီ (၁၅)မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရိဆောင် မီဒီယာခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(၂၁)ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၅၃ ရက် မြောက်နေ့ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၅၃ ရက်မြောက် နေ့အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မောင်တောဒေသပြည်သူများအား တွေ့ဆုံအားပေး နှစ်သိမ့်၊ လိုအပ်သော စားနပ်ရိက္ခာ၊ အ၀တ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ကူညီထောက်ပံ့
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သြဂုတ် ၂၅ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများနှင့် ဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့ ခေတ္တခိုလုံလျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနှင့် အဖွဲ့သည် သြဂုတ် ၂၈ ရက်မှ သြဂုတ် ၃၁ရက်အထိ မောင်တောဒေသအတွင်း ခေတ္တခိုလုံရာနေရာများအား ပြည်သူများ သွားရောက် တွေ့ဆုံအားပေးနှစ်သိမ့်စကား ပြောကြားကာ လိုအပ်သော စားသောက်ဖွယ်ရာများ၊ ဆေးဝါးများနှင့် အသုံးအဆောင်များကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နယ်မြေ စိုးမိုးရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ရန်ကာစေတီ ကျေးရွာမှ ဒိုင်းနက်တိုင်းရင်းသား ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး မဦးခင်ခင်မှာ ဦးခေါင်းခွံကွဲနှင့် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ များဖြင့် သြဂုတ် ၂၈ ရက်တွင် အောင်သပြေတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၂၀]
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ လသာကျေးရွာမှ ဟိန္ဒူလူမျိုး အိမ်ထောင်စု ၇၀ စု လူဦးရေ ၃၀၀ ဦးခန့်အား ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများမှ ရန်ပြုပိတ်ဆို့ထားသဖြင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အပြင်စည်းလုံခြုံရေး၊ လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးနှင့် အနီးကပ်လုံခြုံရေးတို့ဖြင့် ဘေးကင်းရာသို့ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး (၅၄) ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပဲမျိုးစုံဈေးကွက်အလားအလာနှင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း
လာမည့် ပဲစင်းငုံသီးနှံပေါ်ချိန်တွင် တောင်သူများ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပဲနှမ်းကုန်သည်များအသင်း၊ UMFCCI တို့ပူးပေါင်း၍ လှည့်ပတ်ရံပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ဆောင်ရွက်ရေး စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူက ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 5:25 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆန်စပါးကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ဆန်စပါးကြိတ်ခွဲ ထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကို သြဂုတ် ၃၀ ရက် ကနေပြည်တော်၊ မယ်ဇလီကုန်းရွာရှိ မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာ စီးပွားရေးအများပိုင် ကော်ပိုရေးရှင်း လီမိတက် (MAPCO) ဆန်စက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၁၉]
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ပြည်ပနိုင်ငံ များ၊ သံရုံးများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များအား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဌာန၊
Posted by moi at 3:45 PM No comments:
[ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား သတင်း -၁၈]
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များ သိရှိနိုင်ရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမီဒီယာ များပါဝင်သော သတင်းအဖွဲ့ မောင်တောဒေသအတွင်းလှည့်လည်သတင်းယူ
ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ မောင်တောဒေသအတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းများရယူနိုင်ရန် သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသက်ဆွေ ခေါင်းဆောင်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများမှ အဖွဲ့ ဝင်၂၂ဦး ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် သြဂုတ် ၃၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်တွေမြို့မှ ဘူးသီးတောင်မြို့သို့ အမြန်ရေယာဉ်များဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် မောင်တောမြို့သို့ ရောက်ရှိသတင်းယူကြသည်။
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs, received Mr. Bill Richardson, Chairman of the Richardson Center and former Governor of New Mexico, the United States of America, andadelegation led by Mrs. Anuradha Gupta, Deputy CEO of Gavi- The Vaccine Alliance and accompanying parliamentarians from Denmark and Sweden separately yesterday at her ministry in Nay Pyi Taw.
U Henry Van Thio, Vice-President and Chairman of National Road Safety Council (NRSC) addressed the third meeting of the council at the Ministry of Transport and Communications in Nay Pyi Taw and spoke about basic steps toward improving road safety such as the use of seat belts, abstaining from use of mobile phones and driving more slowly.
Ethnic people in Mingyi and Tamanthar villages provided with aid
Authorities delivered aid to villagers in conflict areas in northern Rakhine yesterday, pledging providing security to them.
A group of independent journalists including local and foreign media yesterday talked to people, who fled their villagers after terrorist attacks, sheltering at schools in Maungtaw.
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး 5th Thailand-Myanmar Hight Level Committee Meeting သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် Khon Khan လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြပြီး ဘန်ကောက်မြို့၊ ဒွန်မောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ရှိ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ် Win6သို့ရောက်ရှိကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းနှင့် ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
မောင်တောမြို့နယ် အတွင်းရှိ မင်းကြီးနှင့် တမန်းသားကျေးရွာများမှ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများအား စားနပ်ရိက္ခာများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
စစ်တွေ သြဂုတ် ၃၀
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ရခိုင်ပြည် နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ယနေ့နံနက် (၁၀)နာရီခွဲတွင် မောင်တောမြို့နယ် အတွင်းရှိ မင်းကြီးရွာနှင့် တမန်းသား ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများထံ သွားရောက် တွေ့ဆုံ အားပေးစကား ပြောကြားပြီး လိုအပ်သောစားနပ် ရိက္ခာ များကို ကူညီထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
စွမ်းအင်ကုန်ကြမ်း အဖြစ်ပါ အသုံးဝင်သည့်အတွက် ကြံသီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အားပေး ဆောင်ရွက်
ကြံသီးနှံသည် စက်မှုကုန်ကြမ်း ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ သကြားထုတ်လုပ်သော သီးနှံအပြင် စွမ်းအင် ထုတ်သီးနှံအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွက် ဈေးကွက်သေချာသည့် အလားအလာကောင်း သီးနှံဖြစ်၍ စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်သည့် သီးနှံဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူက ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေ၊မြေ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ အရ ကြံသီးနှံ စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ ပြည်တွင်းတွင် သကြားအခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ ရှိခြင်း၊
အမျိုးသားယာဉ် အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ကောင်စီ (National Road Safety Council - NRSC) တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
အမျိုးသား ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကောင်စီ( National Road Safety Council – NRSC) ၏ တတိယ အကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ အမျိုးသား ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟန်နရီဗန်ထီးယူ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု The Richardson Center ဥက္ကဋ္ဌနှင့် Gavi – The Vaccine Alliance အဖွဲ့အစည်း၏ ဒုတိယအမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နှင့် ဒိန်းမတ်နှင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့မှ လွှတ်တော်အမတ်များအား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် သြဂုတ် ၃၀
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု The Richardson Center ဥက္ကဋ္ဌ၊ နယူးမက္ကဆီကို ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Mr.Bill Richardson အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင်လည်းကောင်း၊
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်း Uber ကုမ္ပဏီမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် Uber ကုမ္ပဏီမှ မူဝါဒရေးရာနှင့် စည်းမျဉ်းဥပဒေ ဆိုင်ရာ ဦးဆောင် အရာရှိဖြစ်သူ Mr Ben Brooks နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၀နာရီခွဲ တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် အမှတ် (I-1) ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေး
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ဌာနေ ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံးမှ ညှိနှိုင်းရေးမှူး Ms. Renata Dessallien အား ယနေ့မွန်းလွဲ (၃) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိသည့် လူနာများအား ဆေးဝါး ကုသပေးနေမှု ကြည့်ရှု့အားပေး
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ယနေ့မွန်းလွဲ(၁) နာရီတွင် စစ်တွေမြို့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိပြီး တာဝန်ရှိ သူများအား တွေ့ဆုံမှာကြားကာ မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသည့် လူနာများအား ဆေးဝါးကုသနေမှုကို ကြည့်ရှု အားပေးသည်။
မြန်မာ့မီးရထား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမ လေးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအား နေပြည်တော် ဘူတာကြီးရှိ မြန်မာ့မီးရထားရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ
မြန်မာ့မီးရထား၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ပထမလေးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအား သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင် တက်ရောက်မှာကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၅၃)ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး (၅၃) ရက်မြောက်နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၅၂ ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၅၂ ရက်မြောက် နေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန် အစည်းအဝေး ၂၀ ရက်မြောက်နေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀ ရက် မြောက် နေ့ကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီခွဲနာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်း ကော်မတီ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီအရင်ခံစာများအပေါ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးကြသည်။
According to Sittway General Hospital,5patients who were seriously wounded in the attacks launched by extremist terrorists and currently receiving medical treatment at Maungtaw hospital were transferred to Sittway general hospital yesterday morning.
Myanmar to standardize customs valuations and audits
Myanmar has agreed to apply internationally accepted standards for customs valuations at ports of entry, according toareport in Myanma Alin, yesterday.
A motion urging the government for systematic extraction and conservations of gems and minerals wealth owned by the country and its nationals for the country’s future as well as future generations was tabled by U Kyaw Aung Lwin of Sedoktara constituency and the Hluttaw decided to approve the motion in Pyithu Hluttaw 5th regular session 51st day meeting held yesterday.